Allgedo.com » 2012 » October » 14
Home » Archive Daily October 14th, 2012
Ciidamada Huwanta oo duulaan ku ah Magaaladda Jilib
Wararka ka imaanaya gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in ay ka soconayaan halkaas qaban qaabo dagaal oo ku wajahan deegaano katirsan gobolkaas oo ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab. Sida ay sheegeen Saraakiil katirsan ciidamada dowlada ee Kismaayo kusugan waxaa ay ciidamada udhaqaaqeen dhanka degmada Jilib oo ay kusugan yihiin Shabaab. “ciidamo ayaa maanta ka baxay Kismaayo waxaana ay kusii jeedeen...
Ciidamada Nabad sugida oo lagu wareejiyay degmada Walaweyn
Ciidamada nabad sugida dowlada Soomaaliya ayaa maanta lagu wareejiyay amaanka degmada Walaweyn ee gobolka Sh/Hoose. Waxaa Maanta Magaaladaas gaaray ciidamo iyo Saraakiil katirsan dowlada iyo kuwa Amisom kuwaas oo goob joog u ahaa in ciidamada nabad sugida lagu wareejiyo sugida amaanka Walaweyn. Jeneral C/kariin Yuusuf Aadan (Dhegabadan) ayaa sheegay in ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Amisom ay dhibaato...
Afgooye oo lagu soo bandhigay Xoogag katirsan Al-Shabaab
Ciidamada nabad sugida ayaa magaaladda Afgooye ee gobolka Sh/Hoose kusoo bandhigay dhalinyaro katirsan xoogaga Shabaab. Dhalinyaradan ayaa waxaa lagu soo qabtay howlgal ay ciidamada dowlada ka sameeyeen degmada Afgooye iyo deegaano kale oo katirsan Sh/Hoose. Taliyaha nabad sugida Gobolka Banaadir Khaliif Axmed Ereg oo saxaafada kula hadlay Degmada Afgooye ayaa sheegay in ku dhawaad 15 kamid ah xoogaga...
Ra’isul Wasaare Dr Saacid oo lagu amray in labo maalin uu ku hor yimaado barlamaanka
Kulan ay maanta xildhibaanada barlamaanka yeesheen ayaa waxaa ay kaga hadleen arimo badan oo ku aadan dastuurka Soomaaliya iyo Ra’isul Wasaarihii dhawaan lasoo magacaabay. Sidoo kale waxaa kulanka looga hadlay n Xeer Hoosaadka Baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale Miisaaniyada afarta Sano ee Soo socota. Xildhibaanada ayaa dhanka kale ka dooday xiliga Ra’isul Wasaare Dr SAACID la horkeenayo...
Dil ka dhacay Magaaladda Kismaayo iyo Howlgalo soconaya
Wararka ka imaanaya Magaaladda Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in halkaas uu xalay ka dhacay dil loo gaystay mid kamid ah culumadda Magaaladda. Rag ku hubaysan Aalada Bastoolada ayaa si bareer ah toogasho ugu gaystay Mu’adamin mid kamid ah masaajida Kismaayo. Dad kusugan Kismaayo ayaa Warbaahinta AOL usheegay in Marxuumka ladilay uu kasoo baxay masjidka kadibna ay toogteen dad...
Dowlada oo dalbaday in cunaqabteynta hubka laga qaado
Dowlada Soomaaliya ayaa ka dalbatay golaha amaanka ee QM in ay Soomaaliya ka qaado cunaqabateynta saaran. Isagoo lahadlayay qaar kamid ah saxaafada ayaa Wasiirka Arimaha Gaashaandhiga Xuseen Carab Ciise uu sheegay in cuna qabateynta hubka oo laga qaado Somaaliya ay soo dadajin doonto in lasoo celiyo amaankii iyo kala danbayntii. ‘Waxaan ka dalbanaynaa QM in ay di ufiiriyaan cunaqabteynta saaran...
Xildhibaanada barlamaanka oo kulan ku leh Muqdisho
Mudanayaasha barlamaanka Soomaaliya ayaa sakaay kulan xasaasi ah ku leh magaaladda Muqdisho iyadoo ay ka doodayaan qodobo dhowr ah. Sida ay Warbaahinta AOL usheegeen rag katirsan xildhibaanada cusub, mudanayaasha barlamaanka ayaa saakay ka doodaya qodobo ay kamid yihiin soo dhisitaanka gudi hoosaadyada xildhibaanada. Mudanayaasha barlamaanka ayaa xarunta kulanka ku xaadiray barqadii saakay iyadoona...